चुनाव सार्ने हाम्रो माग होईन : मोर्चा | Ekhabar Nepal
नवलपरासी: नवलपरासीमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी थरुहट मोर्चा नवलपरासीले आन्दोलनलाई जारी राखेको छ । सरकारले २ नं. प्रदेशको चुनाव सारेपनि प्रदेश नं. ५ मा मोर्चाको माग अझै पुरा नगरेको मोर्चाले आरोप लगाउदै हिजो प्रेस विज्ञप्ती निकाली आन्दोलन जारी रहेको जानकारी दिएको हो ।
उता राजपाले आह्वान गरेको मधेस बन्दको चौथो दिन शुक्रबार सिराहामा प्रहरी सवार बसमा तोडफोड भएको छ ।
राजपा कार्यकर्ताले सिराहाको गोलबजारमा प्रहरीले प्रयोग गरेको बसमा तोडफोड गरेका हुन् । ‘प्रहरी’ लेखिएको ब्यानर देख्दादेख्दै अराजक कार्यकर्ताले ढुंगा प्रहार गरेका थिए । आन्दोलनकारीप्रति प्रहरी संयम बन्दा उनीहरु अराजक बनिरहेको स्थानीयले बताएका छन् । बन्दकर्ताले रिक्सा चालकमाथि समेत दुर्व्यवहार गरेका छन् भने अत्यावश्य औषधि पसल पनि खुल्न दिएका छैनन् ।
विराटनगरमा निर्वाचन कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न गएका १५ जना राजपा कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
राजपा कार्यकर्ताले महोत्तरीमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमको कार्यालयमा तोडफोड गरेका छन् । राजपा केन्द्रीय सदस्य उपेन्द्र महतोले प्रहरीको गाडी तोडफोड र कांग्रेसको झण्डा जलाइएको पुष्टि गर्दै ती अराजक घटनाका फोटो समेत कार्यकर्ताको वीरताका रुपमा फेसबुकमा पोष्ट गरेका छन् ।